Budata akwụkwọ ahụaja nke ọhụrụ iMac Pro | Esi m mac
Budata akwụkwọ ahụaja nke ọhụrụ iMac Pro
Anyị hụrụ macOS High Sierra akwụkwọ ahụaja ụbọchị ole na ole gara aga ma anyị hụrụ ya n'anya. Ugbu a akwụkwọ ahụaja nke anyị na-ewetara gị bụ nke ọhụrụ iMac Pro nke Apple gosipụtara na Mọnde gara aga, June 5 na Elọ Mgbakọ McEnery na San Jose. N'ezie iMac a ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ nnukwu ihe ịtụnanya nke isi okwu ebe ọ bụ na ọ dịghị onye tụrụ anya na otu ndị nwere nkọwa nke iMac Pro a, agba ma ọ bụ ọbụlagodi na a ga-emegharị ahịrị ahụ na ngwaahịa ọhụrụ, anyị niile doro anya na iMac ga-agbanwe na na njedebe nke afọ mana iMac a nọ ebe a.
Obi abụọ adịghị ya, ihe na-atọ ụtọ gbasara otu egwuregwu bụ ikike ọ nwere ike ịnwe a igwe dị gịrịgịrị dị ka iMac site na Apple, mana maka ndị ọkachamara ahụ dị mkpụmkpụ ma chọọ kọmputa nwere nkọwa kachasị mma, ihuenyo 27-inch na ohere nke ijikọ ọtụtụ 5k monitors, iMac a doro anya na ọ bụ ezigbo nhọrọ.
Ma anyị na-aga ịhapụ ikpọ iMac na anyị na-aga na-elekwasị anya na akwụkwọ ahụaja o nwere. Isiokwu a Ọ bụghị ngosipụta na akwụkwọ ahụ aja, abụghị maka macOS ma ọ bụ maka ngwaọrụ iOS. N'ihe banyere macOS, ha na-aga n'ihu na Yosemite National Park na maka iMac Pro, ha hapụrụ anyị nke a anyị na gị niile kerịta na mkpebi nke 2767 x 1556:
N’oge na-adịghị anya, anyị ga-enwe ụdị beta ọhaneze nke ihe niile ha gosipụtara na isi okwu Apple, ebe anyị nwere ike enwe ndị a na akwụkwọ ahụ aja na ìgwè anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » iMac » Budata akwụkwọ ahụaja nke ọhụrụ iMac Pro
Foto agbamakwụkwọ na ụlọ ahịa Apple!
Nri ehihie na ndị isi Apple na-ewu ewu